पनौती अपडेटः प्रदर्शन नरोकिए पछि अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश जारी – Radio Roshi
पनौती अपडेटः प्रदर्शन नरोकिए पछि अनिश्चितकालीन कर्फ्यु आदेश जारी
in अपराध / रोशी खबर — by Roshikhabar —	March 17, 2020
रोशी सहकर्मी–चैत्र ४,
काभ्रेको पनौतीमा हिजो अपरान्ह बाट सुरु भएको प्रदर्शन नोकिएपछि अनिश्चितकालीन कर्फ्यु लगाइएको छ । आज बिहान ९ बजेदेखि कर्फ्यु लगाइएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काभ्रेले जनाएको छ । हिजो (सोमबार) पनौती नगरपालिका ५ मानेश्वरीमा बा ५ ख ५४८० नम्बरको टिप्परले ठक्कर दिँदा खानीखोला गाउँपालिका १ की ३३ वर्षीया जुनीमाया तामाङ र उनकी तीन वर्षीया छोरी स्मारिकाको ज्यान गएको विरोधमा राति प्रहरी र स्थानीयबीच झडप भएको थियो ।
झडपकै क्रममा भीडबाट गोली चल्दा प्रहरी हवल्दार दिलिप बुढाथोकीको देब्रे पातेमा गोली लागेको छ । स्थानीय हर्कबहादुर लामा र सरदलाई गोलीको छर्रा लागेको छ । उनीहरुको को बनेपाको शिरमेमोरियल अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । आन्दोलनकै बीचबाट अज्ञात व्यक्तिले ८ बजेतिर गोली चलाएपछि प्रहरीले जवाफी फायरिङ गर्दा ४ जना प्रदर्शनकारी पनि घाइते भएका छन् ।
तर प्रहरीका अुनसार उनिहरुले प्रयोग गरेको गोलीबाट छर्रा नआउने बताउँछन् । प्रहरीले चलाएको गोली प्रहरीलाई नै कसरी लाग्यो ? छर्रा कहाँबाट आयो ? कस्ले गोली चलायो ? भन्नेबारे प्रहरी पनि अनविज्ञ रहेको श्रोतको भनाई छ ।
घटना सामान्य नभएपछि प्रशासन कार्यालयले अहिले बिहान ९ बजेदेखि अनिश्चितकालको लागि निषेधाज्ञा जारी गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, काभ्रेपलाञ्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) श्रवणकुमार तिमिल्सिनाका अनुसार पनौतीको पूर्व शंख जानेबाटोको चौकीसम्म ८०० मिटर क्षेत्र र पश्चिममा कुशादेवी जानेबाटोको १ किलोमिटरसम्म कर्फ्यु आदेश जारी गरिएको छ । त्यस्तै, बनेपा जाने ठाडोबाटोको १ किलोमिटर क्षेत्र र देखाञ्चोकतर्फको १ किलोमिटर मिटर क्षेत्रमा पनि कर्फ्यु लगाइएको छ ।
आमा छोरीको मृत्यु भएदेखि त्यसको विरोधमा स्थानीयले प्रहरी बिटमा आगो लगाएपछि प्रहरीले केही राउण्ड हवाई फायर र आधा दर्जन अश्रुग्यास समेत प्रहार गरेको थियो । आन्दनेलनरत स्थानीयले टिप्पर चलाउन रोक लगाएका छन् । टिपर चालक रोशी गाउँपालिका वडा नम्बर ६ घर भएका ३५ बर्षीय नबराज थापा प्रहरी नियन्त्रणमा छन् ।